Tigreen Kana Mara Ilmaan Oromoo biyyaa Baqachiisuun irratti Raawwatte. Mucaan amma suuraa irratti argitan kun gaafa biyya jiru san fakkaata – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsTigreen Kana Mara Ilmaan Oromoo biyyaa Baqachiisuun irratti Raawwatte. Mucaan amma suuraa irratti argitan kun gaafa biyya jiru san fakkaata
Tigreen Kana Mara Ilmaan Oromoo biyyaa Baqachiisuun irratti Raawwatte. Mucaan amma suuraa irratti argitan kun gaafa biyya jiru san fakkaata gaafa Tigreen Biyyaa Baqachiifte boodaan biyya Libya keessatti akkana tahe!
BARA LUBBUUN NAMAA GATII DHABE
Biyya ufii keessatti nagaan bahanii galuun gaafa ulfaate,hidhaa fi ajjeechaan gaafa hammaatte,baratanii baruumsa barataniin hojjachuun gaafa ulfaate san irra darbe lubbuun jiraachunu shakkisiisa gaafa namatti ta’e,diina jalaa bahanii dhessuun waan hin oolle. haa ta’uu garuu biyyaa bahanis waan heddutu nama muudata.
Baqattoonni biyyoota Afrika gara garaa irraa karaa Libiyaatin gara Europe seenuuf imalan hedduun isaani harka daddabarsitoota seeran alaa galanii mallaqa gudda gaafatamu, maati bira bilbilaa tumaa sagalee dhaqeessisu, qaama isaani ciiciruu,ibiddaaa fi elektrikiin woddu, qaama isaani keessa kan kaleen baafames jiru. Kannen biraa ammo hojii humnaa olii hojjachiisuu, tumuu, mallaqaan gurguruun akkuma itti fufetti jira
Erga gaazexessitoonni CNN qaaman liibiyaa deemani baqqattoota kannin sagaleefi suuranis, yeroo isaan gurguramanis woraabanii addunyaan gahani asi biyyoonni Afrikaa tokko tokko baqattoota lammiilee isaani galfataaniiru isaan keessa Cameruun fi Naajeeriyaan keessatti argamu. TPLF kan uummata biyya jiruu ajjeesuuf, buqqisuufi hidhutti jirtii kan biyyaa bahee rakkatuuf dirmannaan goote hin jiru.
Eegaa baqattoota biyya Ethiopia keessa bahanii karaa libiyaatin qaaxxamuran keessa Oromoon hedduu akka ta’e waanuma beekkamu.
Oromoon biyya jiru ni ajjeefama, biyyuma ufii kessatti baqatee beelaan dhuma. kan hidhame tumtoo irra gaheen miidhama, inni kuun yaala dhooggama,kan biyyaa baqate kunoo akka suuraa armaan gadii kana godhama, inni kuuni irbaata qurxummii ta’a. kunniin hunduu waan onnee nama cabsuudha. Rakkoon bu’uuraa Garbummaadha furmaanni ammoo Bilisummaa qofa.
Via: Temesgen Beriso